Ukukhusela iRente | Law & More B.V. | Eindhoven kunye neAmsterdam
Blog » Ukukhusela irente
Xa urenta indawo yokuhlala eNetherlands, unelungelo lokuqeshisa ngokuzenzekelayo. Kuyafana nakwabahlali bakho kunye nabahlali. Ngokomgaqo, ukhuseleko lwerente luquka imiba emibini: ukhuselo lwamaxabiso erente kunye nokukhuselwa kwirente ekuphelisweni kwesivumelwano sokuqesha ngengqondo yokuba umnini-mhlaba akanako ukusiphelisa isivumelwano sokuqesha. Ngelixa yomibini le miba yokhuseleko yerente isebenza kubaqeshi bezindlu zokuhlala, oku akunjalo kubaqeshi bezindlu kwicandelo lasimahla. Loluphi ukhuselo lokurenta olusemxholweni xa kunye nokuba yintoni kanye kanye ukhuseleko lwamaxabiso okhuselo okanye ukhuselo lokurenta kwimeko yokupheliswa kwengqeshiso, kuxoxwa ngako kule bhlog. Kodwa okokuqala, le bhlog ixoxa ngemeko ekuthiwa yindawo yokuhlala kuyo yonke indawo yokhuseleko lwendawo yokuhlala.
Ukusetyenziswa kwezibonelelo ezisemthethweni malunga nokukhuselwa kwirente, kufuneka kuqala ibe ngumbuzo wendawo yokuhlala. Ngokwenqaku le-7: 233 le-Dutch Civil Code, indawo yokuhlala kufuneka iqondwe njengendawo yokuhlala engenakushenxiswa nanjengoko irentiwe njengendlu ezimeleyo okanye engaxhomekekanga, ikharavani okanye isitendi esenzelwe ukuhlala isigxina. Akukho mahluko wumbi wenziweyo phakathi kwabaqeshi bezindawo ezizimeleyo okanye ezingenazindawo zokuhlala ngenjongo zokukhusela irente.
Umxholo wendawo yokuhlala ukwabandakanya izixhobo ezingashukumiyo, ngamanye amagama izibonelelo ezithi ngokwemvelo zazo zinxulunyaniswe ngokungenakwahlukaniswa nekhaya, ikharavani okanye inowuthi okanye eziyinxalenye yayo ngenxa yesivumelwano sokurenta. Kwindawo yokuhlala entsonkothileyo, oku kunokuba, umzekelo, izinyuko, iigalari kunye neepaseji kunye nofakelo oluphakathi ukuba zichongwe ngesivumelwano njengezithuba ezingenabuntu.
Nangona kunjalo, akukho ndawo yokuhlala ngaphakathi kwentsingiselo yeCandelo 7: 233 yeKhowudi yaseKhaya yaseDatshi ukuba iyaxhalaba:
ukusetyenziswa kwexesha elifutshane kwendawo yokuhlala; ingaba oku kunjalo kugqitywe ngokobunjani bokusetyenziswa, umzekelo njengekhaya leholide okanye indlu yokutshintshiselana. Ngale ndlela, ixesha elifutshane libhekisa ekusebenziseni hayi kwixesha ekuvunyelwene ngalo;
indawo yokuhlala exhomekeke kuyo; Injalo imeko ukuba indlu iyarenta kunye nendawo yorhwebo; Kwimeko apho, ikhaya liyinxalenye yendawo yeshishini erentiweyo, ukuze kungabikho miqathango yezindlu kodwa imigaqo ephathelene nendawo yeshishini isebenza kwikhaya;
iphenyane lendlu; Esi sisenzeko esingahambelani nenkcazo yezomthetho yenqaku 7: 233 yeKhowudi yaseDatshi. Indlu enjalo ayinakuhlala ithathwa njengepropathi engenakususwa, kuba akukho manyano luhlala luhleli nomhlaba okanye ibhanki.
Ukukhuselwa kwexabiso lokuqesha
Ukuba imeko yendawo yokuhlala echazwe apha ngasentla ifezekisiwe, umqeshi uya kuqala onwabele ukukhuselwa kwamaxabiso erenti. Kwimeko apho kusebenza la manqaku alandelayo:
umlinganiselo phakathi komgangatho, kubandakanywa indawo yokuhlala eqeshisiweyo naphakathi kwerente ekufuneka ihlawulwe, kufuneka ube sengqiqweni;
umqeshi unokukhetha maxa onke ukuba ixabiso lokuqala lokuqeshisa livavanywe yiKomiti yokuQesha; oku kunokwenzeka kuphela kwiinyanga ezi-6 emva kokuqala kokuqeshisa; Isigqibo seKomiti yeRente siyabophelela, kodwa singangeniswa kwiNkundla yeSithili ukuba siqwalaselwe;
umnini-mhlaba akakwazi kuqhubeka nonyuso olungenamda lwerente; Imida ethile yomthetho iyasebenza kulonyuso lwerhafu, njengepesenti ephezulu yokunyusa irente emiselwe nguMphathiswa;
Amagatya asemthethweni malunga nokukhuselwa kwirente ngumthetho onyanzelekileyo, okt, umnini-mhlaba akanakuphuma kubo kwisivumelwano sokuqeshisa esenzakalisa umqeshi.
Ngesiqhelo, imigaqo-nkqubo echaziweyo isebenza kuphela kumqeshi wezindlu zokuhlala. Esi sithuba sokuhlala siphantsi kwecandelo lokuqeshisa elilawulwayo kwaye ke kufuneka sibonwe ngendawo yokuhlala eyeyenkululeko, okanye icandelo lokurenta simahla. Kwimeko yezindlu ezikhululekileyo okanye zasimahla, irente iphezulu kangangokuba umqeshi akasafanelekanga ukuba afumane inkxaso-mali yerenti kwaye ke ngenxa yoko uwela ngaphandle kokhuseleko lomthetho. Umda phakathi kwezindlu ezikhululekileyo nezoluntu zimalunga nexabiso lokuqasha elimalunga ne-752 euro ngenyanga. Ukuba ixabiso lokuqeshisa ekuvunyelwene ngalo lidlula eli xabiso, umqeshi akanakuphinda axhomekeke kwimigaqo echazwe apha ngasentla, kuba ichaphazela ukurentwa kwezindlu ezikhululekileyo.
Ukukhusela irenti ekuphelisweni kwesivumelwano sokurenta
Nangona kunjalo, ngokusetyenziswa kwelinye icala lokhuselo lwerente, akukho mahluko wenziwe phakathi kwabaqeshi bezindlu zentlalo kunye nenkululeko. Ngamanye amagama, oku kuthetha ukuba wonke umqeshi wendawo yokuhlala ubukhulu becala kwaye ukhuselekile ngokuzenzekelayo ekuphelisweni kwesivumelwano sokurenta, ngengqiqo yokuba umnini-mhlaba akanakusicima nje isivumelwano sokurenta. Kule meko, umqeshi ukhuselwe ngokukodwa kuba:
Ukupheliswa ngumnini-mhlaba akusiphelisi isivumelwano sokuqesha ngokungqinelana neNqaku 7: 272 leKhowudi yaseDatshi; Ngokomgaqo, kuxhomekeke kumnini-mhlaba ukuba azame okokuqala ukuphelisa isivumelwano sokurenta ngokuvumelana. Ukuba oko akusebenzi kwaye umqeshi akavumelani nokupheliswa, ukupheliswa komnini-ndlu akusiphelisi isivumelwano sokurenta. Oku kuthetha ukuba isivumelwano sokuqeshisa siyaqhubeka njengesiqhelo kwaye umnini-mhlaba kufuneka afake ibango elisemthethweni lokupheliswa kwesivumelwano sokurenta kunye nenkundla yesithili. Kwimeko enjalo, isivumelwano sokurenta asizukuphela de inkundla yenze isigqibo esingenakuguqulwa kwisicelo sokuyekiswa komnini-ndlu.
ngokweNqaku 7: 271 leKhowudi yaseDatshi, umnini-mhlaba kufuneka achaze isizathu sokupheliswa; ukuba umnini-mhlaba uza kusiphelisa isivumelwano sokurenta, kufuneka athobele imigaqo yeli nqaku sele likhankanyiwe kwiKhowudi yoLuntu. Ukongeza kwixesha lesaziso, umhlaba wokupheliswa yinto ebalulekileyo kule meko. Umnini-mhlaba kufuneka ke achaze esinye sezizathu zokupheliswa kwesaziso sokupheliswa kwakhe, njengoko kuchaziwe kwi-Article 7: 274 umhlathi 1 we-Dutch Civil Code:
umqeshi akakhange aziphathe njengomqeshi olungileyo
ichaphazela irente yexesha elimiselweyo
umninimzi ufuna ngokungxamisekileyo le ndawo ayiqeshileyo ukuze ayisebenzise
umqeshi akavumeli kwisibonelelo esifanelekileyo sokungena kwisivumelwano esitsha sokuqeshisa
Umnini-mhlaba ufuna ukuqonda ukuba umhlaba usetyenziselwa ntoni na kwirente leyo ngokokucwangciswa kokucandwa komhlaba okusebenzayo
umdla womnini-mhlaba ekuphelisweni kwesivumelwano sokuqeshisa ungaphezulu kwezo zomqeshi ekuqhubekekeni kwesiqeshiso (kwimeko yengqeshiso yomnini-mhlaba)
isivumelwano soqeshiso sinokupheliswa yijaji ngezizathu ezichazwe kwinqaku 7: 274 umhlathi 1 weKhowudi yaseDatshi; Le mihlaba ikhankanywe ngasentla iphelele: Oko kukuthi, ukuba iinkqubo zomthetho zenziwa phambi kweenkundla, ukupheliswa kwesivumelwano sokurenta kwezinye izizathu akunakwenzeka. Ukuba esinye sezizathu sele zikhankanyiwe, inkundla kufuneka inike ibango lomqeshi lokuphelisa. Kwimeko apho, akukho gumbi (lokuqhubeka) lokulinganisa umdla. Nangona kunjalo, okwahlukileyo kusebenza kule ndawo ngokunxulumene nokupheliswa komhlaba wokusetyenziswa okungxamisekileyo komntu. Xa ibango livunyelwe, inkundla iya kugqiba nexesha lokukhutshwa. Nangona kunjalo, ukuba ibango lomnini-mhlaba liyarhoxiswa, isivumelwano soqeshiso esifanelekileyo asinakupheliswa nguye kwakhona iminyaka emithathu.
UMthetho wokuHamba kweNtengiso
Ngaphambili, ukhuseleko kwirente lwalusenziwa ngokuxhomekeke ekugxekweni okuninzi: ukukhuselwa kwirente bekuya kuhamba kakhulu kwaye kukho abanye abaninimzi abangathanda ukurenta indlu ukuba ukhuseleko lwerhafu belungekho ngqongqo kangako. Indlu yowiso-mthetho ibonakalisile ukuba novakalelo koku kugxekwa. Ngesi sizathu, indlu yowiso-mthetho ikhethe ukwazisa lo mthetho ukusukela nge-1 Julayi 2016, iRental Transfer Transfer Act. Ngalo mthetho mtsha, ukukhuselwa komqeshi kuye kwaba ngqongqo kancinci. Kwimeko yalo mthetho, olu lolona tshintsho lubaluleke kakhulu:
ngezivumelwano zokurenta malunga nendawo yokuhlala ezimeleyo yeminyaka emibini okanye engaphantsi kunye nezivumelwano zokurenta ngokubhekisele kwindawo yokuhlala engazimeleyo yeminyaka emihlanu okanye engaphantsi, kuye kwenzeka ukuba umnini-mhlaba arente ngaphandle kokukhuselwa kwirente. Oku kuthetha ukuba isivumelwano sokurenta siphela ngokusebenza komthetho emva kwexesha ekuvunyelwene ngalo kwaye akufuneki sipheliswe ngumnini-ndlu njengangaphambili.
ngokwaziswa kweekhontrakthi zeqela ekujoliswe kulo, kuye kwenziwa kwalula ukuba umnini-mhlaba aphelise isivumelwano sokuqeshisa malunga nezindlu ezilungiselelwe iqela elithile ekujoliswe kulo, njengabafundi. Ukuba umqeshi akasenguye weqela ekujoliswe kulo kwaye, umzekelo, akasenakuthathwa njengomfundi, umnini-mhlaba uya kuba nakho ukuqhubeka nokupheliswa ngenxa yokusebenzisa ngokungxamisekileyo ngokukhawuleza nangakumbi.
Ngaba ungumqeshi kwaye uyafuna ukwazi ukuba loluphi ukhuseleko kwindawo efanelekileyo? Ngaba ungumninindlu ofuna ukusiphelisa isivumelwano sokurenta? Okanye unayo nayiphi na eminye imibuzo malunga nale bhlog? Emva koko qhagamshelana Law & More. Amagqwetha ethu ziingcali kumthetho wokurenta kwaye ayakuvuyela ukukunika iingcebiso. Banokukunceda ngokusemthethweni ukuba imbambano yakho yerente ikhokelele kwiinkqubo zomthetho.
Post edlulileyo Uqhawulo mtshato kumanyathelo ali-10
Post Next Athini amalungelo akho njengomqeshi?